फ्रेन्चाइज क्रिकेटको संस्कृति
ट्वान्टी–२० क्रिकेटको पारा नै अलिकति धनी र हुनेहरूको जस्तो छैन र ? खाने पिउने, अनि अलिकति रमाइलो गर्ने खालको पनि छ, यो । अझ भन्ने हो भने यसको स्वभाव नै ‘कर्पाेरेट’ खालको छ । त्यसैले त अचेल ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा फ्रेन्चाइज संस्कृति पाइन्छ । कोही धनी छ र उसलाई क्रिकेटमा खर्च लोभ छैन भने सबैभन्दा राम्रो त आफ्नो एउटा टिम नै हुनु राम्रो । अथवा कोही सक्नेले टिम बनाएर ‘कर्पाेरेट’ क्षेत्रलाई खुसी बनाउँछ र त्यसलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यो त राम्रो नै हो ।
फ्रेन्चाइज क्रिकेटको पूरा कथा यही होभन्दा हुन्छ । अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य त के भने यसमा पर्याप्त मात्रामा ‘ग्ल्यामर’ लुकेको हुन्छ । त्यसैले त यस्ता प्रतियोगितामा सुन्दर र आकर्षित युवतीहरू जहाँ त्यहीँ देख्न पाइन्छ, जसरी यस्तै दृश्य कुनै ठूलो कर्पाेरेट अफिसमा देख्न पाइन्छ । चियर लिर्डस त ट्वान्टी–२० क्रिकेटको ज्यान नै भन्दा हुन्छ । चौका छक्का प्रहारमा उनीहरूले देखाउने प्रस्तुतिमा आकर्षित नभएर बस्न सक्ने को हुन्छ र ?
अनि विवाद त यसको अर्को नाम भयो नै । सानोतिनो विवाद भएन भने त मज्जा नै भएन । भर्खर पोखरामा पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) सकियो । भनिन्छ, पोखरामा क्रिकेट जति लोकप्रिय हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । तर, जति बेलादेखि पोखरामा पीपीएल हुन थालेको छ, क्रिकेट मन पराउने पोखरेलीको संख्या बढ्न थालेको छ । खेल हेर्न दर्शकको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढेको छ । यसपल्ट भएको प्रतियोगिता दोस्रो संस्करणको हो र विजेता रह्यो, पारस खड्काको चितवन राइनोज ।
नेपालमा जति पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेट हुन्छन्, त्यसमध्ये पीपीएल त कान्छो हो । जम्माजम्मी हाम्रोमा तीन फ्रेन्चाइज क्रिकेट हुने गर्छ, त्यसमध्ये पहिलो त धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) नै भयो ।
नामैअनुसार यो धनगढीमा हुन्छ । धनगढीमा यस्तो क्रिकेट सफल भएपछि नै यसले अरूलाई पनि यस्तै प्रतियोगिता गराउन प्रेरित गरेको हो । तेस्रो भनेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) भयो, यो काठमाडौंमा हुन्छ । फ्रेन्चाइज क्रिकेटमध्ये सबैभन्दा बढी चहलपहल देखिने यसै प्रतियोगितामा हो । यो अलि व्यवस्थित हुन्छ, अनि रंगीन खालको पनि यही हुन्छ । यो कतिसम्मको छ भने यसको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने संस्था नै विदेशी हो ।
अब प्रश्न हुन्छ, कसरी आयोजना हुन्छ त यस्ता प्रतियोगिता ? कसरी यसमा लगानी हुन्छ त ? भन्नै पर्छ, यो नाफाको क्रिकेट हो, जसमा सबै ‘विन विन’ अवस्थामा हुन्छ, खेलाडीदेखि टिम मालिक र सबै प्रायोजक र सह–प्रायोजक । पूरा विश्वमा फ्रेन्चाइज क्रिकेटको ‘रोल मोडल’ हो, भारतको आईपीएल, त्यो भनेको इन्डियन प्रिमियर लिग । विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा धनी प्रतियोगिता हो । सन् २००८ देखि सुरु भएको आईपीएललाई पछ्याएर नै यस्ता प्रतियोगिता हुने गर्छन् ।
नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेटले अनुसरण गरेको पनि आईपीएल नै हो । डीपीएलको आयोजक हो, धनगढी क्रिकेट एकेडेमी । त्यसो भनेको सुभाष शाही । सुरुमा उनले प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिम इच्छुकलाई बेचे । त्यसका लागि आयोजकले निश्चित रकम पाउने गर्छ र यो २५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । आयोजकको आफ्नै मुख्य र सहायक प्रायोजक हुने भयो नै । टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट पनि पैसा उठ्ने भयो नै, दर्शकले किनेको टिकटको पैसा
आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले डीपीएलमा छ टिम छन्, त्यसमध्ये विराटनगर किंग्सको मालिक पारस लुनिया हुन् भने सीवाईसी अत्तरियाको नरबहादुर राई । यस्तै काठमाडौं गोल्डेन्सको रमेश सिलवाल, महेन्द्र युनाइटेडको सुशीलकुमार श्रेष्ठ, रुपन्देही च्यालेन्जर्सको सुरज उप्रेती र धनगढी स्टारस्को कृष्ण बोहार । पीपीएलमा खेल्ने छ टिममध्ये विराटनगर टाइटन्समा पारस लुनिया, बुटवल ब्लास्टर्समा नरेश गौतम, चितवन राइनाजेमा रेशम महरा, एक्सपर्ट धनगढी ब्लुजमा विनायक पोखरेल र पोखरा पल्टनमा विनायक पोखरेल मालिक छन् ।
यसको आयोजना क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले गर्छ । यसको स्वामित्वमा को–को छन् भनेर प्रस्ट नदेखिएपछि यसका मूल हर्ताकर्ता पारस र ज्ञानेन्द्र नै हुन् । ईपीएल भने ठ्याक्कै कर्पाेरेट खालको छ । जस्तो, भैरहवा ग्लायडिटर आदित्य सन्घाई, विराटनगर वारियर्स विशाल अग्रवाल, चितवन टाइगर्स किशोर भट्टराई, काठमाडौं किंग्स इलेभन टेले होल्डिङ्स, ललितपुर प्याट्रोइट्स किशोर महर्जन र पोखरा राइनोज साहिल अग्रवालको हो । यसअघि यसमा विशाल ग्रुप्स, शंकर ग्रुप्स, पञ्चकन्या ग्रुप्स, कान्तिपुर पब्लिकेसनदेखि घोराही सिमेन्ट्सको पनि टिम थियो । यसका आयोजक हुन्, आमिर अख्तर ।
यी सबै व्यक्ति अथवा संस्थाले टिममा निश्चित रकम खर्चिने भयो नै । अनि यी सबै टिमका आफ्नो फरक–फरक प्रायोजक पनि हुने भए । यी संस्थाका लागि आफ्नो क्रिकेट टिम भनेको बजारमा हामी पनि छौं भन्ने देखाउने हो । अनि कोही धनाढ्य उद्योगपतिले आफ्नो पनि क्रिकेट टिम छभन्दा त्यसको शान नै बेग्लै हुन्छ । अझ भन्ने हो भने यो एउटा कर्पाेरेट क्षेत्रको ‘मार्केटिङ टुल’ नै भयो । गत वर्ष ईपीएल ललितपुरले जितेको थियो । यो टिमका आफ्नै अलग आधा दर्जन प्रायोजक थिए । उपाधि जितेर उसले राम्रै पुरस्कार राशि पनि जित्यो ।
टिमले खेलाडी किन्ने भनेको लिलामीबाट हो । खेलाडीको निश्चित मूल्य हुन्छ । यसका लागि खेलाडी आफैंले आफ्नो मूल्यसहित लिलामीका लागि नाम दिनुपर्छ । साधारणतया तीन मूल्यका खेलाडी हुन्छन् अनि टिमका कप्तानदेखि मुख्य खेलाडीका रूपमा मार्की प्लेयर भयो नै । यिनीहरूले बढी पाउने भयो नै । विदेशी खेलाडी पनि टिमले अनुबन्ध गर्न पाउने हुन्छ । विदेशी खेलाडीको उपस्थितिले नै टिम बलियो भएको र राम्रो खेलेको ताजा उदाहरण नै छन् ।